Nciphisa Isibambi Esifanele
Iqamba kabusha icubungula izinkinga eziyisithupha nezixazululo
Imbobo iyanda, iphutha likhulu Ububanzi obungaphandle be-reamer bukhulu kakhulu noma umphetho we-reamer yi-burr; Ijubane lokusika liphakeme kakhulu; Okuphakelayo okungalungile noma isabelo sokucubungula ngokweqile; I-Reamer main deflection Angle inkulu kakhulu; Ukuguqa kwe-Reamer; Onqenqemeni cutting reamer banamathela t ...
CNC machining ithuluzi phezu ahlabayo
Ekucubunguleni, imvamisa ekhoneni lommese wasentwasahlobo futhi kuholele esimweni sokusika, uma ukusetshenziswa kwamathuluzi afanele nezindlela zokucubungula, kunganciphisa ithuba lommese wasentwasahlobo. Ubudlelwano bokuguquguquka kwethuluzi ngu: Kusuka kufomula engenhla, singazi ukuthi kukhona t ...
Ochwepheshe be-HSS thread ompompi
Eminyakeni edlule, sisebenzise futhi / noma sahlola inqwaba yamabhithi wokuprakthiza cishe kuzo zonke izinhlelo zokusebenza. Kulesi sibuyekezo, sifuna ukunquma ukubhola okufanele kakhulu kwezinsimbi. Lokhu kufaka phakathi insimbi eqinile, insimbi engagqwali, i-aluminium, njll. Sifuna ngisho ukubona ukuthi yiluphi uhlobo lwebhola lokubhola elingabhoboza ...
Sibutsetelo seThuluzi Lokumboza
Ithuluzi lobuso bokumboza ithuluzi ubuchwepheshe bokuguqulwa kobuso obuthuthukisiwe obuphendula ukufunwa kwemakethe. Kusukela yavela ngawo-1960, ibilokhu esetshenziswa kabanzi metal ahlabayo ithuluzi yokukhiqiza umkhakha.Ekakhulukazi emva kokuvela ngesivinini ahlabayo ubuchwepheshe, enamathela ubuchwepheshe has ...
Vibration okwenzeka ngesikhathi senqubo ye-CNC Milling
Ekugayweni kwe-CNC, ukudlidlizela kungenzeka ngenxa yemikhawulo yamathuluzi wokusika, izibambo zamathuluzi, amathuluzi omshini, izinto zokusebenza noma izinto zalapho zikhona, okuzoba nomthelela omubi ekuchomeni ngokunemba, ebusweni nasekusebenzeni kahle.Ukunciphisa ukusika ukudlidliza, izinto ezifanele ngidinga ukuba ...
Ukucutshungulwa kwentambo ukusebenzisa amathuluzi wokucubungula intambo ukucubungula izindlela ezahlukahlukene zangaphakathi nezangaphandle zontambo. Okokuqala, ukusika intambo Ngokuvamile kubhekisa kundlela yokucubungula intambo ku-workpiece ngensimbi yokwakha noma i-abrasive, ikakhulukazi kufaka phakathi ukujika, ukugaya, ukuthinta umkhono wocingo we-grindi ...
IGreenleaf yethula izigayo zokuphela zobumba eziqinile, ezisezingeni eliphakeme emakethe
IGreenleaf Corp. eseSagergertown, ePennsylvania, ikhiphe iXSYTIN-360, umugqa omusha wezindawo zokugaya eziqinile ezisezingeni eliphakeme, emakethe yomhlaba. Emhlanganweni we-Zoom womhlaba wonke omemezela izigayo ezintsha zokuphela kokujikeleza, uJim Greenleaf, umongameli kanye ne-CEO yeGreenleaf Corp., uthe iXSYTIN-360 “ingomunye ...
Ake sibone ukuthi isidina kufanele senziwe kanjani
Ukunemba kwesicefe kuphakeme kakhulu, ukunemba okuyisisekelo kokubhora okuhle kungafinyelela ku-IT8 ~ IT7, futhi ukuvula kungalawulwa ngaphakathi kokucaciswa okungu-0.01mm. Kuhle, ngokubhora okujwayelekile, ubukhulu bendawo engu-R ...
Izindlela Ezi-8 Zokubulala Isiphetho Sakho Sokugcina
1. Ukuyigijimisa Ngokushesha noma Ngokunensa Ukunquma isivinini nokuphakelwa okulungile kwethuluzi lakho nokusebenza kungaba inqubo eyinkimbinkimbi, kepha ukuqonda isivinini esifanele (RPM) kuyadingeka ngaphambi kokuba uqale ukusebenzisa umshini wakho. Ukusebenzisa ithuluzi ngokushesha okukhulu kungadala usayizi we-chip ongaphansi noma ngisho nenhlekelele ...
Ukukhethwa kwamathuluzi we-CNC okokusebenza
Okwamanje, izinto ezisetshenziswa kabanzi zethuluzi le-CNC ikakhulukazi zifaka amathuluzi edayimane, amathuluzi we-cubic boron nitride, amathuluzi we-ceramic, amathuluzi aboshwe, amathuluzi we-carbide namathuluzi wensimbi asheshayo. Kunamabanga amaningi okusika amathuluzi nezinto zawo ziyahlukahluka kakhulu. izinkomba zokusebenza kwe t ezahlukahlukene ...
ikheli Cha, 60, Xiangjiang Road (South), Chuangye Street, Suzhou National Hi-Tech District 215129
ibhokisi leposi nicogao@speedleopard.cn